अमेजन उत्पादन आईडी नम्बर के हो?
एक अमेजन बिक्रेताको रूपमा, तपाईंलाई सजग हुनु पर्छ कि अमेजनमा प्रत्येक उत्पादनको आईडी नम्बर छ। उत्पाद पहिचानकर्ताहरू नयाँ उत्पादन पृष्ठहरू र सूचीहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अमेजनमा धेरै कोटीहरू उनीहरूको विशिष्ट यूपीसी छन्। अमेजन यूपीसीहरूको मात्र वैध निर्माता जसले विश्वव्यापी रूपमा जीएस 1 (ग्लोबल मानक 1) हो। यो कम्पनी आपूर्ति श्रृंखला बारकोडिंग को लागी वैश्विक मानक प्रदान गर्दछ। विश्वव्यापी मानक 1 अमेजनमा ग्लोबल ट्रेड आईटम नम्बरको साथ प्रत्येक वस्तुमा समस्याहरू।
GS1 आवश्यकताहरू पछ्याउनको लागी, तपाईंलाई खुदरा चाहिएको उत्पादनको प्रकार, तपाईंको उत्पादन डाटाको गुण, र त्यस उत्पादन कोटीमा बेच्नका लागि विशिष्ट आवश्यकताहरू टाइप गर्न आवश्यक छ।
यस आलेखमा, हामी अमेजन ग्लोबल ट्रेड प्लेटफर्ममा तपाईंको उत्पादनको प्रचारको लागि GTIN हरू र UPC हरूको भूमिका बुझ्दछौं।
तथापि, हामी अघि बढ्नु अघि, मलाई ध्यान दिनुहोस कि अमेजनले यूएससी कोडहरू तिनीहरूको ग्यासमा डाटाबेसमा GS1 डाटाबेसको आधारमा विभिन्न एसिइनमा नियुक्त गर्ने क्रममा क्रस गर्न सुरु गर्न जान्छ। यसको अर्थ हो कि कुनै पनि बिक्रेता बिना प्रामाणिक UPC कोडहरू अमेजन खोजी परिणामहरूबाट हटाउन सकिन्छ।
अमेजन यूपीसी कोड: उनी के हुन् र हामीलाई किन चाहिन्छ?
यूपीसी कोड एक बार कोड प्रतीक हो जुन प्रत्येक व्यापारिक वस्तु को विशिष्ट रूप देखि निर्दिष्ट गरिएको छ। यो अमेरिका, यूके, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, र अन्य अंग्रेजी बोल्ने देशहरूमा व्यापक रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा 12 संख्यात्मक अंकहरू छन् जुन UPC कम्पनी उपसर्ग, वस्तु सन्दर्भ र चेक अंक देखाउँदछ। GS1 द्वारा निर्दिष्ट गरिएको पहिलो अंक नम्बरहरू विशिष्ट रूपमा पहिचान गरिएका ब्रान्ड मालिकहरूलाई उत्पादक चिन्हहरू यूपीसी प्रतीकहरूको साथ चिन्ह लगाउनका लागि।
अर्को पाँच अङ्कले वस्तु सन्दर्भ देखाउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरू ब्रान्ड मालिक द्वारा निर्दिष्ट गरिएको निर्दिष्ट सन्दर्भ सन्दर्भमा नियुक्त गरिएका छन्।
र अन्तिम अंकलाई चेक अंक भनिन्छ। यो एक गणना गरिएको अंक हो जुन अघिल्लो अङ्कबाट एमओडी चेक अङ्क गणनाको आधारमा।
यूपीसी कोडहरू दुई प्रकारका छन् - UPC-A र UPC-E। अंतर यो हो कि यूपीसी-ई कोड छोटो छ र ज्वरोले दबाइयो। यसको मतलब यो छ कि तपाईं00 को बारकोड भित्र हेर्न सक्नुहुन्न, केवल GTIN भित्र।
एएसिन के छ (अमेजन मानक पहिचान संख्या)?
अमेजन मानक पहिचान नम्बर अमेजनमा वस्तुहरू पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू 10 अक्षरहरू र अंकहरूको अद्वितीय ब्लकहरू छन्। आवश्यक वस्तुको लागि ASIN कोड तपाई अमेजन उत्पाद जानकारी पृष्ठमा पाउन सक्नुहुनेछ। यो ध्यान दिइन्छ कि अमेजनहरूका लागि आईएसबीएन बारकोड प्रयोग गर्दछ। मानक पहिचान संख्या ISBN को रूप मा किताबहरु को लागि एक नै हो। यद्यपि, सबै अन्य वस्तुहरूका लागि, वस्तु अमेजनको सूचीमा अपलोड हुँदा नयाँ मानक नम्बर सिर्जना गरिन्छ।
वस्तुको ASIN कोड उत्पाद विवरण पृष्ठमा अन्य उत्पादन विवरणहरू जस्तै रंग, साइज, आदि जस्ता बीच राखिएको छ। यो कोड अमेजनको सूचीमा उत्पादन खोज्न सकिन्छ। Amazon खोज बक्समा एक निश्चित एसिइन वा आईएसबीएन कोड टाइप गरेर, तपाइँले यस कोडसँग आवश्यक खोज परिणामहरू पाउनुहुनेछ (शर्तमा सूचीमा सूचीबद्ध सूचीमा)।